Horudhac: Manchester City vs Manchester United… (Rikoorrada la yaabka leh ee u yaalla Red Devils oo saadaalinaya ciyaartan) – Gool FM
(Manchester) 07 Maarso 2021. Garoonka Etihad Stadium ayaa marti gelin doona kulanka ugu xiisaha badan toddobaadkan horyaalka Premier League iyadoo kooxaha Manchester City iyo Manchester United ku hardami doonaan ciyaarta darbiga magaalada Manchester.
Manchester City ayaa ku jirta waqti cajiib ah iyagoo dhex maquuranaya guulo xiriir ah, halka Man United ay wax gool ah dhalin weysey saddexdii kulan ee ugu dambeysay dhammaan tartammada.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 7:30 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Difaaca Manchester City ee Nathan Ake ayaa si buuxda tababarka ugu soo laabtay, waxaana uu taam u yahay ciyaarta caawa ee Manchester Derby.
Pep Guardiola ayaa la filayaa inuu dib safkiisa koowaad ugu soo celin doono Ilkay Gundogan iyo John Stones kuwaasoo kursiga keydka kusoo bilawday ciyaartii ugu dambeysay.
David de Gea ayaa lammaantiisa kula sugan dalka Spain kaddib dhalashada curadkooda, sidaas darteed, Dean Henderson ayaa shabaqa Manchester United kusoo bilaaban doona labo kulan oo xiriir ah markii ugu horreysay.
Red Devils ayaa qiimeyn doonta saacadaha ugu dambeeya dhaawaca Anthony Martial oo jilibka ka yara xanuunsanaya, balse waxaa la rajeynayaa in Victor Lindelof uu kusoo laabto safka Man United kaddib markii uu xanuun dhabarka ah ku seegay kulankii Cystal Palace.
Manchester United ayaa guul gaartay saddex ka mid ah afartii kulan ee ugu dambeysay oo ay Manchester City marti u noqotay horyaalka iyo tartammada maxalliga ah.
Red Devils ayaa u socota inay saddex guul oo xiriir ah kusoo gaarto garoonka Man City markii ugu horreysay tan iyo intii u dhexeysay 1993 ilaa 2000 xilligaas oo ay afar guul oo xiriir ah bannaanka kaga soo gaartay kooxda ay dariska yihiin.
Toddobo ka mid ah 10-kii kulan ee ugu dambeeyay darbiga Manchester dhammaan tartammada waxaa guusha helay kooxda martida ah.
Labada Manchester ayaa horyaalka Ingiriiska ku kulmay 151 kulan, waxayna Man United guul gaartay 58 jeer, halka ay Man City guuleysatay 45, waxayna barbarro galeen 48 jeer.
Manchester City ayaa guuleysatay hada 21 kulan oo xiriir ah iyagoo dhaliyay 55 guul, halka laga dhaliyay siddeed gool oo qura.
Kaliya Bayern Munich oo 24 guul oo xiriir ah dhammaan tartammada gaartay sanadkii tagay iyo Real Madrid oo 22 guul oo xiriir ah guul gaartay dhammaan tartammada sanadkii 2014 ayaa ah labada koox ee ka dhisan shanta horyaal ee ugu weyn qaarad Yurub kuwaaso ka guulo xiriir badan Man City.
Kooxda Macallin Pep Guardiola ayaa hadda tirsaneysa 15 guul oo xiriir ah horyaalka Premier League, waxayna saddex guul u jiraan inay sameeyaan rikoor cusub oo guulaha xiriirka horyaalka ah, waxaana hadda 17 guul oo xiriir ah hore u gaaray isla Man City oo 17 guul xiriirisay sanadkii 2017 iyadoo Liverpoolna ay barbarreysay rikoorkaas sanadkii hore.
Sergio Aguero ayaa dhaliyay sagaal gool kulammada uu Manchester United kaga hor tagay horyaalka iyo tartammada kale ee gudaha, balse kaliya hal gool ayuu ka dhaliyay Red Devils siddeeddii kulan ee ugu dambeysay.
Ederson ayaa 15 kulan shabaqiisa difaacday xilli ciyaareedkan horyaalka, waxaana uu hal shabaq difaacasho u jiraa intii uu sameeyay xilli ciyaareedkii hore oo 16 jeer shabaqiisa difaacday kuna qaatay abaal-marinta Golden Glove (goolhayaha ugu wanaagsan horyaalka).
Manchester United ayaa lumisay dhibcaha toddobo ka mid ah 10-kii kulan ee ugu dambeysay horyaalka tan iyo guushii ay Burnley ka gaareen isla markaasna ay hoggaanka horyaalka kula wareegeen bishii January ee sanadkan.
Man United ayaa ah kooxda kaliya ee aan wax guuldarro horyaalka ah aysan kusoo gaarin kulammada bannaanka guud ahaan shanta horyaal ee ugu weyn qaaradda Yurub.
Red Devils ayaa guuldarro la’aan ah 21 kulan oo ay bannaanka kusoo ciyaartay iyadoo gaartay 13 guul, siddeed kalena barbarro gashay, waxayn lix kulan oo guuldarro la’aan ah ay ku barbarreyn karaan rikoorka guuldarra la’aanta ee ugu dheer taariikhda horyaalka Ingiriiska oo ay sameysay Arsenal intii u dhexeysay 2003 ilaa 2004.
Ole Gunnar Solskjaer kooxdiisa ayaanan wax gool dhalin lixdii kulan ee ugu dambeysay horyaalka oo ay la ciyaartay Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City ama Tottenham, waxaana mid walba oo ka mid ah afartii kulan ee ugu dambeysay oo ay kooxahan la ciyaartay ku dhammaadeen barbarro goolal la’aan ah.
Manchester United ayaa xilli ciyaareedkan gashay lix barbarro oo goolal la’aan ah, waxaana ay barbarreeyeen rikoorkooda hal fasal ciyaareed ay galaan barbarraha ugu badan ee goolal la’aan ah.
Man United ayaa qarka u saaran inay afar kulan oo xiriir ah barbarro goolal la’aan ah gasho markii ugu horreysay taariikhda, halka markii ugu dambeysay ee ay gool dhalin weyso afar kulan oo xiriir ah ay ahayd 1992.
Man United ayaa gashay 27 barbarro oo goolal la’aan ah horyaalka Premier League tan iyo markii uu shaqada macallinnimo ka fariistay Sir Alex Ferguson, waana kooxda barbarraha ugu badan ee goolal la’aan ah gashay muddadaas horyaalka.